ओखलढुंगा दुर्घटनामा मृत्यू हुनेको सनाखत, के का लागि सोलु आएका थिए ? – Himal FM 90.2 MHz
ओखलढुंगा दुर्घटनामा मृत्यू हुनेको सनाखत, के का लागि सोलु आएका थिए ?
स्थानीय समाचार adminhimal March 31, 2019
ओखलढुंगाको मानेभन्ज्याङ स्थित भडारेखोलामा जीप दुर्घटना हुदा ६ जनाको ज्यान गएको छ । तिन जना घाईते भएका छन् ।
सोलुखुम्बुबाट काठमाण्डौका लागि छुटेको बा.१६च. २२०७ नंम्बरको जीप सडकबाट करिब पाँच सय मिटर तल खसेको थियो । मृत्यू हुनेमा ताप्लेजुङका मिङमा शेर्पा र साङगेल शेर्पा रहेका छन् भने काठमाण्डौ बौद्धका नुर्वु शेर्पा, ङवाङ शेर्पा, डोमा शेर्पा र नुमा शेर्पाको पनि घटनास्थलमै ज्यान गएको ओखलढुंगा प्रहरीले जनाएको छ ।
घाईतेको घुर्मिमा प्राथमिक उपचार पछि थप उपचारका लागि हेलिकप्टर मार्फत काठमाण्डौ लगिएको छ । प्राईभेट स्कार्पियो जीप सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका २ जुनवेशी गुम्बाबाट आईतबार विहान काठमाण्डौका लागि छुटेको थियो ।
उनीहरु औँसी पछिको पच्चिस दिनमा गरिने ङिसुङ पुजाका लागि जुनबेशी स्थित थुप्तेन छोलिङ गुम्बामा शुक्रबार आईपुगेका थिए । शनिबार दिनभर पुजामा सहभागी बनेका उनीहरु आईतबार विहान काठमाण्डौका लागि गुडेको गुम्बामा एक लामाले बताए ।